တိုက်ဆိုင်မှုများရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ထိုသူများကိုရည်ရွယ်ပါတယ် ဆိုပြီး အရှိုက်ထိအောင် ရေးသားလာတဲ့ ဇာဏ်ခီရဲ့စာတစ်စောင် – All Update News
တိုက်ဆိုင်မှုများရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ထိုသူများကိုရည်ရွယ်ပါတယ် ဆိုပြီး အရှိုက်ထိအောင် ရေးသားလာတဲ့ ဇာဏ်ခီရဲ့စာတစ်စောင်
လိုချင်မှုတွေနဲ့ ပူလောင်နေတဲ့ စကစ အ တွက် အရှိုက်ထိအောင် ရေးသားလာတဲ့ ဇာဏ်ခီရဲ့စာတစ်စောင်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ သက်တမ်းနုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို ထိရောက်စွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ခီမောင်နှံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ခရစ်စတီးနားခီကတော့ ခင် ပွန်းဖြစ်သူကို မင်းသားတင်ရိုက်ပြီး ကိုယ် တိုင်က ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်စတီးနားခီနဲ့ ဇာဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံက တော့ ရုပ်ရှင်ကား အနည်းငယ်နဲ့တင် မတူကွဲပြားစွာ ထိုးမြောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ မိသားစုဟာ အာရှနိုင်ငံတခုမှာ
ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဇာဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဘဲ Instagramတွေမှာပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အမေစုကို အမိန့်ချလိုက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ဇာဏ်ခီက ”
ဘာမှမလိုအပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး။ အကုန်လို ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲ ပူလောင်မှုတွေက တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်တက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ ” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်..
ပရိသတ်ကြီလည်း ပြည်သူအားလုံးရဲ့အမေစု ကျန်းမာစေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်…
Source: Zen Kyi
လိုခ်င္မႈေတြနဲ႔ ပူေလာင္ေနတဲ့ စကစ အတြက္ အရႈိက္ထိေအာင္ ေရးသားလာတဲ့ ဇာဏ္ခီရဲ႕စာတစ္ေစာင္
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ သက္တမ္းႏုၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ရင္ထဲကို ထိေရာက္စြာဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာကေတာ့ ခီေမာင္ႏွံတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ခရစ္စတီးနားခီကေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို မင္းသားတင္႐ိုက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္က ဒါ႐ိုက္တာလုပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ အိမ္ရွင္မေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ခရစ္စတီးနားခီနဲ႔ ဇာဏ္ခီတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ကား အနည္းငယ္နဲ႔တင္ မတူကြဲျပားစြာ ထိုးေျမာက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ သူတို႔ မိသားစုဟာ အာရွႏိုင္ငံတခုမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။
ဇာဏ္ခီတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပုံစံေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစဘဲ Instagramေတြမွာပုံေတြ ဗီဒီယိုေတြ တင္ေပးေနၾကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အေမစုကို အမိန႔္ခ်လိုက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ဇာဏ္ခီက ”
ဘာမွမလိုအပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာမွမျဖစ္သြားပါဘူး။ အကုန္လိုခ်င္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ပဲ ပူေလာင္မႈေတြက တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျမင့္တက္လာဖို႔ရွိပါတယ္။ ” ဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီလည္း ျပည္သူအားလုံးရဲ႕အေမစု က်န္းမာေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါအုံးေနာ္…
Previous Article ဒီနေရာလေးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတယ် ဒီနေရာလေးမှာ ပြည်သူက ကျွေးတဲ့ ထမင်းစားတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေက ကိုရဲမင်း
Next Article နာမည်ကြီး Streamer Caster K တစ်ယောက်ပျောက်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး BG ပွဲတွေနဲ့အတူ ပြန်မြင်ချင်လှပါပြီ